म केवल भित्ताको पोस्टर बन्न आएको होइन, जनताको विश्वास जित्न आएको हुँ
वडाध्यक्ष, कीर्तिपुर नगरपालिका–४
सिंहदरवारका अधिकार गाउँ गाउँमा विकेन्द्रीत गर्दै पहिलो पटक भएको संघीय गणतन्त्र नेपालका स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अहिले परीक्षा चलिरहेको छ । स्थानीय जनताका विकासका चाहाना, आवश्यक्ता परिपूर्तिका लागि सही योजना छनौट, संचालनका लागि चौतर्फी दवावमा रहेका स्थानीय पनकायका जनप्रतिनिधहरुको हनिमुन पिरिएड पनि सकिनै लागको छ । यसै सेरेफेरोमा हाम्रा अखबार नेपाल÷टाईम्स प्रतिनिधि अशोक अधिकारीले कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्वर ४ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र बानियासँग समसामयिक विषयमा रोचक कुराकानी गरेका छन । प्रश्तुत छ वडाध्यक्ष बानियाका विकास परियोजनाको खाका उनकै शब्दमा :
– तपाई निर्वाचित हुनुभएको आज करिब तीन महिना बितिसक्यो, समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
लगभग तीन महिना मैले वडाको गतिविधिलाई कसरी चुस्त बनाउने भन्नेमा मेरो ध्यान केन्द्रीत गरेको छु । नगरपालिकासँग समन्वय गरी विकास निर्माणको काम कहाँ, कसरी आवश्यकता अनुरुपको योजना तर्जुमा गर्ने बारेमा छलफल केन्द्रीत छ, तत्कालिन, अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना कसरी तयार पार्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रीत भएको छ ।
– तत्कालिन, अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजनामा छलफल केन्द्रीत भएको छ भन्नु भयो कसरी योजना वर्गीकरण गर्नुभएको छ ?
यो हाम्रो कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं ४ भौगोलिक दृष्टिकोणले अति सुन्दर वडा हो । बोसनडाँडा र चम्पादेवी डाँडा हाम्रै वडामा पर्छ । यसको सुन्दरताले हर कोहीको मन लोभ्याउन सक्छ । काठमाडौमा खुल्ला वातावरणको अभाव छ केही व्यवस्थित गर्न सके यो हरियाली वातावरणले सबैलाई आकर्षित गर्न सक्छ । यो वडामा कसरी पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ, कसरी वडाबासीमा वडास्तरमा नै रोजगारिको स्रोत पहिल्याउन सकिन्छ सीमित आर्थिक स्रोतको बाबजुद कसरी योजना बनाउने बिषयमा छलफल केन्द्रीत गरेका छौ । यसैगरी मुहानको स्रोत भएको स्थान सीम, दुध पोखरी राउते भीर लगायतको स्थानको संरक्षण कसरी गर्ने गृहकार्यमा छौ । अल्पकालिन योजनामा सडकको स्तरउन्नति गर्ने सहायक बाटो निर्माण, सरसफाई अभियान, चेतनामूलक कार्यक्रम युवा केन्द्रीत सिपमुलक तालिम आदि रहेका छन् ।
– यस वडामा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न तपाईको योजना कास्तो छ त ?
यस वडामा प्राचीन बाघभैरव मन्दिर रहेको छ भने चम्पादेवी मन्दिर हाम्रै शिरमा छ । बाघ भैरव मन्दिरले ऐतिहासिक महत्व बोकेको छ । प्रचार प्रसारको अभावमा यी धार्मिकस्थल प्रचारप्रसार कै अभावमा गुमनाम छन् । चम्पादेवी डाँडाको काखमा रहेको यो मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ । चम्पादेवी डाँडाको शिरमा चम्पादेवी मन्दिर रहेको छ । बाघ भैरवदेखि चम्पादेवी मन्दिरसम्म बाघ भैरव–चम्पादेवी टे«किङ–हाइकिङ टे«लको विकास गर्ने योजनामा छलफल भैरहेको छ । चोभारदेखि बाघ भैरवसम्म साईकलिङ ट्र्याक खोल्ने योजना बनाएको छु । बाघभैरव मन्दिर अगाडिको बनलाई पिकनिक स्पटमा विकास गर्ने योजना छ ।
हाम्रो वडाका बाटो समयमा मर्मत नहुदा खाल्डाखुल्डी धेरै छ भने बाटो पनि साँघुरिदै गएको छ यस तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रीत भएको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्दा हाम्रो वडामा एकमात्र सामुदायिक स्कुल रहेकोमा उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा चिन्ताजनक अवस्थामा छ स्कुललाई दुब्न नदिनु हाम्रो चुनौति बनेको छ । यस वडामा समस्याहरु धरै छन् १८ वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन भएको छ जनप्रतिनिधि नहंँदा समस्याको पहाड थुप्रिएको छ । जनगुनासो पोख्ने कुनै निकाय थिएन । आज स्थानीय सरकार हुंँदा जनगुनासो वडाबासीबाट आउनु स्वभाविक हो मैले सकारात्मक लिएको छु । पक्कै पनि म जादुको छडी भने होइन म रातारात सबै परिर्वतन गरिहाल्छु म भन्दिन, मेरो कार्यकालमा म जनताको मन जितेरै जानेछु म केवल भित्ताको पोस्टर बन्न आएको होइन केही राम्रो काम गरेर जनताको विश्वास जित्न आएको हुँ । हाम्रो वडाबाट करिब करिब १ करोडको हाराहारीमा नगरपालिकालाई कर तिर्छ तर अहिले बजेट छ ७० लाख मात्रै जसले एउटा व्यक्तिको घर पनि बन्न नसक्ने अवस्था छ । यति सीमित रकमबाट वडा विकास गर्नु चुनौतिपुर्ण त पक्कै छ । आयआर्जनको खाका कोर्न सकिन्छ की भन्नेमा म तल्लिन छु । सबै राजनीतिक दलका साथीलाई पनि साथमा लिएर जानेछु । चुनावको दौरान हामी राजनीतिक प्रतिस्पर्धी थियौ तर अब हामीले मिलेर जानुको विकल्प छैन । अनि मात्र हामी सबैको भावनाको कदर गरेर अगाडि बढ्न सक्छौ । म कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह जनसेवामा लाग्नेछु सम्पूर्ण साथीहरुमा पनि सहयोगको अपिल गर्दछु ।
– विकास निर्माणमा मुख्य प्राथमिक क्षेत्र केलाई मान्नु भएको छ ?
अहिले मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र पानी हो । पानीको मुहानको मुख्य स्रोत यही ४ नम्बर वडामा छ । यति हुंँदा पनि यस वडाका जनता पानी खान नपाएर प्याकप्याक भएको अवस्था छ । गाम्चा, झुलपोखरी, साइरामचोक, सल्यानस्थान, तामाङ गाउँ लगायतको स्थानमा पानीको चरम अभाव रहेको छ । यसको समाधानको लागि खानेपानी संस्थानसँग सहकार्य प्रयास भैरहेको छ । चाँडैै नै खानेपानी समस्या समाधान हुनेछ । जेठ १९ देखि खानेपानीले विभिन्न वहानामा अवरोध सृजना गरेकोमा दुःख लाग्छ । हाल पानी वितरण प्रणाली फितलो छ । वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सकेमात्र पनि पानीको समस्या समाधान हुंन्छ । पानीको मुख्य समस्या रहेको सल्यानस्थानमा रहेको बोरिङको पानीलाई आवश्यकताको पहिलो आधारमा वितरणमुखी बनाउन उपोभोक्ता समिति गठन गरिसकिएको छ । भने १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । समग्रमा खानेपानी वितरणलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेमा जोड दिएको छु । गाम्चाको पानी ट्याङ्की मर्मतको लागि १२ लाख छुुट्याइएको छ ।
– स्थानीय जनताको जनसमर्थन विकास निर्माणको क्षेत्रमा कस्तो पाउनु भएको छ ?
जनसहभागिता सन्तोषजनक रहेको छ । के गर्ने, कसरी जाने, कसरी काम गर्ने सुझाव दिइरहनु भएको छ । भने सृजनशील दवाव पनि दिइरहनु भएको छ । जुन सकारात्मक छ, सल्लाह सुझाव राम्रै पाएको छु भोलिको दिनमा पनि यस्तै समर्थनको अपेक्षा राख्दछु ।
– अधिकारको दृष्टिले अनि आर्थिक दृष्टिले स्थानीय तह बलियो मानिन्छ, सिहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ टोल टोलमा आइपुगेको छ भनिन्छ तपाइको अनुभव कस्तो रह्यो ?
अब यो जुन अधिकार सिंहदरबारदेखि टोल टोलमा आएको भन्ने गरिन्छ, स्पष्ट नियमावली नहुँदा महसुस गर्न सकिएको छैन तत्कालका लागि भन्नुपर्दा सबै नियमावली विधान बनि नसकेको हुनाले यस वडामा जनताबाट संकलित कर जनताका लागि खर्चिन सकिएको छैन । वार्षिक कर १ करोड उठ्छ तर ६५ लाख मात्र विकास निर्माणका विनियोजन हुने गरेको छ ।
– नियमावली तयार नभइसकेको अवस्थामा विकास निर्माणको काम कसरी अगाडि बढेको छ त ?
०७२–०७३ मा जसरी उपभोक्ता समिति गठन गरेर अगाडि बढ्ने प्रावधान थियो त्यही नीति अनुरुप नै अगाडि बढ्छौ ।
– जनता पनि जनप्रतिनिधिसँग विश्वस्त हुन सकेका छैनन किन होला ?
यो पक्कै पनि स्वभाविक हो तर पनि हामी सबैमा चेतना हुनुपर्छ । सडकमा अव्यवस्थित रुपमा निर्माण सामग्री राखिएको छ । त्यसलाई हटाउन सार्वजनिक सूचना पनि प्रकाशित गरिसकेका छौ तर अझैपनि त्यस्ता समस्या यथावत छन् । म एक प्रतिनिधी हुँ । जनताको सहयोग समर्थनबिना विकास सम्भव छैन । म एक्लैले विकास गर्न सम्भव छैन । जनतापनि उठ्नु पर्छ जागरुक हुनपर्छ । मलाई विश्वास छ जनसहयोग प्राप्त गर्न सफल हुनेछु । पुर्णरुपमा बजेट आइनसकेको अवस्था र सीमित साधन र स्रोतको कारण जनअपेक्षित नतिजा आउन नसकेपनि प्राप्त बजेटको उचित सदुपयोग वडा विकासमा लगाउने छु । पारदर्शी ढंगले बजेट विकासमा खर्चने छु ।
– कीर्तिपुर नगरपालिका बनेदेखि आजसम्म नगरबासी भएको अनुभव गर्न पएका छैनौ भन्ने गुनासो आउने गरेको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
हामीले कर तिर्छौ । त्यो करको सुविधा जनताले खोज्छन् तर नगरपालिकामा स्थानीय सरकार नहुँदा समस्या उत्पन्न भएकै हो तर यो समय गुनासो पोख्नको लागि मात्र होइन आज स्थानीय सरकार छ हामी सबै मिलेर विकास निर्माणको काम अघि बढाएको अवस्थामा नगरपालिका हाम्रो भन्ने महसुस हुनथाल्छ । हाम्रो ठाउँ अरु कोही आएर बनाइ दिदैन आज हामीकहाँ पानीको समस्या छ, ढल निकास छैन, बाटो अस्तव्यस्त छ । तर मिलेर गयौं भने सम्पूर्ण समस्याको समाधान हामीसँगै छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र खेतबारी अधिकांश बिक्रि भैसकेका छन्, बाँकी रहेका खाली जमिन पनि उत्पदकत्वमा ह्रास आएको छ ।
– अव्यवस्थित प्लटिङ, अव्यवस्थित घर निर्माणले तिव्रता पाइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
प्रश्न एकदम सान्र्दाभिक छ, अव्यवस्थित प्लटिङ बढिरहेका छन् तर नियन्त्रणको लागि राष्ट्रिय स्तरको नीतिको आवश्यकता छ, र खाली जग्गाको सवालमा, प्लटिङ, अव्यवस्थित घर बनिरहेको सवालमा नगरपालिकाले स्पष्ट नीति नल्याउँदासम्म हामीले मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
– खानेपानीको संरक्षणको लागि तपाईको योजना के छ ?
हिजो तपाई हामीले दख्दै गर्दा खानेपानीका मुहानहरु धेरै थिए । यत्र तत्र पानी मुहानबाट बगेको देखिन्थ्यो । सिम, दुधपोखरी, राउते भिरको त्यही अवस्था थियो । तर अहिले पानीको स्रोत दिन प्रतिदिन सुक्दै गइरहेको छ । पानीको स्रोतलाई जोगाउनको लागि राउते भिरको मुहान संरक्षरणको लागि २ करोड कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेमा नगरपालिकाले योजना बनाउँदै छ । वडा स्तरमा पनि यस्ता विषयहरुमा कसरी जाने भन्ने सवालमा इन्जिनियरसंँग छलफल भैरहेको छ । हामी कहां धेरै खोल्साहरु छन् जहांको पानी खेर गईरहेको छ । यस ठाउँमा कसरी चेक ड्याम तयार गरेर पानी संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा खाकाहरु तयार पार्न मैले इन्जिनियरलाइ भनेको छु । चाँडै नै हामी खाका सार्वजनिक गर्छौ । वडाबाट वार्षिक कर १ करोड बुझाउँछौ तर वडाका लागि रकम ७० लाख मात्र विनियोजन हुन्छ । यस वडाको मुख्य आम्दानीको स्रोत घरबहाल कर हो त्यो पनि नगरपालिकामा बुझाइन्छ त्यो रकम वडामा नै राख्न सके राम्रो हुन्थ्यो यस विषयमा नगरपालिकासँग छलफल भैरहेको छ ।
– अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण विभिन्न राजनीतिक दलबाट तपाईँलाई अवरोध नहोला भन्न सकिन्न सबैलाई मिलाएर कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
चुनावको समयमा हामी जुनसुकै दलबाट प्रतिस्र्पधा गरेपनि सबै भन्दा पहिले हामी दाजुभाइ हौं त्यसैले हामीबीच कुनै कटुता छैन विकास निर्माणको सवालमा हामी एकताबद्व छौं ।
– कुन कुन विधामा कसरी वजेट विनियोजन हुन्छ ?
पानी र बाटो निर्माणका लागि ३५ लाख छुट्याइएको छ भने प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्युनिकरणको लागि प्रकोप कोष पनि बनाउने योजना बनाएको छु । पहिलो चरणमा ३५ लाख अनि दोस्रो चरणमा ३५ लाख गरी जम्मा ७०लाख विनियोजन हुन्छ ।